ယောကျာင်္းပေါင်း 136 ယောက်ကျော်ကို မုဒိမ်းပြုကျင့်ခဲ့ပြီး မုဒိမ်းမှုအကျူးလွန်ဆုံးသူအဖြစ် စံချိန်တင်သွားခဲ့တဲ့ PhD ကျောင်းသား - Mckzone Daily
ဒီလိုမျိုး မုဒိမ်းမှုတွေမှာဆိုရင် အဓိကသားကောင်ဖြစ်ကြရတာကတော့ မိန်းကလေးအများစုပါပဲ ။ သို့ပေမဲ့လည်း ယောင်္ကျားလေးတွေလည်း မုဒိမ်းမှုရဲ့သားကောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောလို့မရပါဘူး ။ ပိုပြီးဆိုးရွားတာကတော့ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ ယောကျာင်္းလေးတွေဟာ လူအထင်သေးခံရမှာ ပိုပြီးရှက်ကြောက်လို့ တိုင်ကြားခြင်းမျိုး ပြုလုပ်လေ့မရှိကြပါဘူး ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ လာပြီးပညာသင်ကြားနေခဲ့တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသား PhD ကျောင်းသားဟာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ မုဒိမ်းမှုအကျူးလွန်ဆုံးသူအဖြစ် စံချိန်တင်သွားပါတယ် ။ ဖြစ်စဉ်ကတော့ အသက် 36 နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Reynhard Sinaga အမည်ရှိတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားဟာ ယောကျာင်္းပေါင်း 136 ယောက်ကို မုဒိမ်းပြုကျင့်ခဲ့တဲ့အပြင် ၊ သိသာထင်ရှားတဲ့ ပြစ်မှုပေါင်း 150 အထိရှိခဲ့လို့ ထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်းချမှတ်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ် ။
ဖြစ်စဉ်ကတော့ Reynhard ဟာ အရက်ဆိုင်အပြင်ဖက်တွေမှာ မူးနေတဲ့ကောင်လေးတွေကို ခေါ်ပြီး သူ၏နေအိမ်မှာအတူအိပ်ဖို့ခေါ်ပါတယ် ။ ထို့နောက် အရက်မူးနေတဲ့ကောင်လေးတွေကို ဆေးမခတ်ခင် အရင်မုဒိမ်းပြုကျင့်လေ့ရှိကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ် ။ ဒါတင်မကသေးဘဲ ပြစ်မှုကျူးလွန်နေခဲ့တာကို သူ၏ လက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့်လည်း မှတ်တမ်းတင် video ရိုက်ကူးခဲ့ပါသေးတယ် ။ သူ၏သားကောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကောင်လေးအများစုဟာ လိင်မတူတဲ့ ကာမဆက်ဆံမှုကိုသာ ကြိုက်နှစ်သက်ကြသူဖြစ်ပြီး ၊ Reynhard ဟာ သူ၏အပေါင်းအဖော်သူငယ်ချင်းများကို ” gay လောကသားတွေကို 2014- 2015 ခုနှစ်တွေမှာ သူကသာ ထိုးဖောက်ကျော်လွှားသူ “ဆိုပြီး မခံချင်စိတ်များဖြစ်အောင်လည်း message ပေးပို့ခဲ့ပါသေးတယ် ။
Reynhard ဟာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံကို ကျောင်းသား visa ဖြင့် 2007 ခုနှစ်က ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၊ Manchester University မှာ PhD ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပညာတက်ရောက်သင်ကြားနေခဲ့ကာ ၊ ‘Sexuality and everyday transnationalism. South Asian gay and bisexual men in Manchester ‘ ဆိုတဲ့ သုတေသနစာတမ်းပြုစုနေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ သိသာထင်ရှားလွန်းတဲ့ ပြစ်မှုတွေကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ 2017 ခုနှစ်မှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံခဲ့ရပါတယ် ။
ဒီလိုမြိုး မုဒိမျးမှုတှမှောဆိုရငျ အဓိကသားကောငျဖွဈကွရတာကတော့ မိနျးကလေးအမြားစုပါပဲ ။ သို့ပမေဲ့လညျး ယောင်ျကြားလေးတှလေညျး မုဒိမျးမှုရဲ့သားကောငျမဖွဈနိုငျဘူးလို့ ပွောလို့မရပါဘူး ။ ပိုပွီးဆိုးရှားတာကတော့ ပွဈမှုကြူးလှနျခွငျးခံခဲ့ရတဲ့ ယောကြာင်္းလေးတှဟော လူအထငျသေးခံရမှာ ပိုပွီးရှကျကွောကျလို့ တိုငျကွားခွငျးမြိုး ပွုလုပျလမေ့ရှိကွပါဘူး ။ ဒီတဈခေါကျမှာလညျး အင်ျဂလနျနိုငျငံမှာ လာပွီးပညာသငျကွားနခေဲ့တဲ့ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံသား PhD ကြောငျးသားဟာ အင်ျဂလနျနိုငျငံရဲ့ မုဒိမျးမှုအကြူးလှနျဆုံးသူအဖွဈ စံခြိနျတငျသှားပါတယျ ။ ဖွဈစဉျကတော့ အသကျ 36 နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈတဲ့ Reynhard Sinaga အမညျရှိတဲ့ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံသားဟာ ယောကြာင်္းပေါငျး 136 ယောကျကို မုဒိမျးပွုကငျြ့ခဲ့တဲ့အပွငျ ၊ သိသာထငျရှားတဲ့ ပွဈမှုပေါငျး 150 အထိရှိခဲ့လို့ ထောငျဒဏျတဈသကျတဈကြှနျးခမြှတျခွငျး ခံခဲ့ရပါတယျ ။
ဖွဈစဉျကတော့ Reynhard ဟာ အရကျဆိုငျအပွငျဖကျတှမှော မူးနတေဲ့ကောငျလေးတှကေို ချေါပွီး သူ၏နအေိမျမှာအတူအိပျဖို့ချေါပါတယျ ။ ထို့နောကျ အရကျမူးနတေဲ့ကောငျလေးတှကေို ဆေးမခတျခငျ အရငျမုဒိမျးပွုကငျြ့လရှေိ့ကွောငျးလညျး သိရှိရပါတယျ ။ ဒါတငျမကသေးဘဲ ပွဈမှုကြူးလှနျနခေဲ့တာကို သူ၏ လကျကိုငျဖုနျးဖွငျ့လညျး မှတျတမျးတငျ video ရိုကျကူးခဲ့ပါသေးတယျ ။ သူ၏သားကောငျဖွဈခဲ့တဲ့ ကောငျလေးအမြားစုဟာ လိငျမတူတဲ့ ကာမဆကျဆံမှုကိုသာ ကွိုကျနှဈသကျကွသူဖွဈပွီး ၊ Reynhard ဟာ သူ၏အပေါငျးအဖျောသူငယျခငျြးမြားကို ” gay လောကသားတှကေို 2014- 2015 ခုနှဈတှမှော သူကသာ ထိုးဖောကျကြျောလှားသူ “ဆိုပွီး မခံခငျြစိတျမြားဖွဈအောငျလညျး message ပေးပို့ခဲ့ပါသေးတယျ ။
Reynhard ဟာ အင်ျဂလနျနိုငျငံကို ကြောငျးသား visa ဖွငျ့ 2007 ခုနှဈက ရောကျရှိခဲ့တာဖွဈပွီး ၊ Manchester University မှာ PhD ကြောငျးသားတဈယောကျအနနေဲ့ ပညာတကျရောကျသငျကွားနခေဲ့ကာ ၊ ‘Sexuality and everyday transnationalism. South Asian gay and bisexual men in Manchester ‘ ဆိုတဲ့ သုတသေနစာတမျးပွုစုနသေူလညျး ဖွဈပါတယျ ။ သိသာထငျရှားလှနျးတဲ့ ပွဈမှုတှကွေောငျ့ ပွီးခဲ့တဲ့ 2017 ခုနှဈမှာ ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးခွငျးခံခဲ့ရပါတယျ ။
အလုပ်အရမ်းကြိုးစားလုပ်နေရတဲ့မိခင်ကို ဆူရှီဝယ်ကျွေးချင်လို့ပါဆိုတဲ့ သားငယ်လေး
အမွေးစုတ်ဖွာနဲ့ကြွက်ကြီးကို ချစ်မဝနိုင်အောင်ဖြစ်ပြီး အစာတွေခွဲဝေကျွေးနေတဲ့ ခွေးလေးတွေ